Ungakubheka Kanjani Ukuvinjelwa Kohambo, Iziqinisekiso Zokubopha kanye Namacala Obugebengu | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Ungakubheka Kanjani Ukuvinjelwa Kokuhamba, Iziqinisekiso Zokubopha kanye Namacala Obugebengu
I-United Arab Emirates (UAE) iyizwe elisengxenyeni esempumalanga yeNhlonhlo Ye-Arabia. I-UAE iqukethe ama-emirates ayisikhombisa: i-Abu Dhabi, i-Ajman, i-Dubai, i-Fujairah, i-Ras al-Khaimah, i-Sharjah ne-Umm al-Quwain.
Ukuya e-Dubai noma e-UAE?
Ungase ube Nokuvinjelwa Kokuhamba noma Icala Lobugebengu
I-Dubai iyindawo edume kakhulu yabavakashi
I-UAE noma i-Dubai ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu izivakashi emhlabeni, futhi, ekugcineni, enye yezindawo ezinhle kakhulu ongahlala kuzo. Kubantu abavela kwamanye amazwe nezakhamuzi zase-UAE, uhulumeni uhlinzeka ngezinzuzo eziningi kanye nezinzuzo eziningi, okuhlanganisa ukunakekelwa kwezempilo, ukudla, impahla yamahhala, imfundo, nama-visa egolide.
I-UAE/Dubai Travel Ban
Ukuvinjelwa kokuvakasha kwe-UAE kungavimbela umuntu ukuthi angene futhi angene kabusha ezweni noma ahambe ngaphandle kwezwe kuze kube yilapho izimfuneko ezithile sezihlangatshezwana nazo.
Yiziphi Izizathu Zokukhipha Isivimbelo Sokuhamba e-Dubai noma e-UAE?
Ukuvinjelwa kokuvakasha kungase kukhishwe ngenxa yezizathu ezimbalwa, ezihlanganisa:
Ukukhishwa ezikweletini ezingakhokhiwe
Ukwehluleka ukuvela enkantolo
Amacala obugebengu noma uphenyo oluqhubekayo lobugebengu
Imithetho yezokufika yephula njengokuhlala ngokweqile kwe-visa
Ukwephulwa komthetho wokuqashwa njengokusebenza ngaphandle kwemvume noma ukuphuma ezweni ngaphambi kokwazisa umqashi nokukhansela imvume
Obani abavinjelwe ukungena e-UAE?
Abantu abalandelayo bavinjelwe ukungena e-UAE:
Abantu abanerekhodi lobugebengu kunoma yiliphi izwe
Abantu abadingisiwe e-UAE nanoma yiliphi elinye izwe
Abantu abafunwa yi-Interpol benza ubugebengu ngaphandle kwe-UAE
Izigilamkhuba zokushushumbiswa kwabantu
Abantu ababandakanyeka emisebenzini yobuphekula noma amaqembu
Amalungu obugebengu obuhleliwe
Noma yimuphi umuntu uhulumeni ambheka njengengcuphe yezokuphepha
Abantu abanesifo esiyingozi empilweni yomphakathi, njenge-HIV/AIDS, i-SARS, noma i-Ebola
Obani abavinjelwe ukuphuma e-UAE?
Iqembu elilandelayo labantu bangaphandle livinjelwe ukuphuma e-UAE:
Abantu abanezikweletu ezingakhokhiwe noma izibopho zezimali (Icala Lokwenza Okusebenzayo)
Abamangalelwa emacaleni obugebengu
Abantu abayalelwe yinkantolo ukuthi bahlale ezweni
Abantu abangaphansi kokuvinjelwa kohambo ngumshushisi womphakathi nanoma yisiphi esinye isiphathimandla esinekhono
Abancane abangaphelezelwa umqaphi
Ungasibheka Kanjani Ukuvinjelwa Kokuhamba e-UAE?
Kunezindlela ezimbalwa zokubheka ukuvinjelwa kohambo.
Amaphoyisa aseDubai anesevisi eku-inthanethi evumela izakhamuzi nezakhamizi ukuthi zihlole noma yikuphi ukuvinjelwa (Chofoza lapha). Isevisi itholakala ngesiNgisi nesi-Arabhu. Ukuze usebenzise isevisi, uzodinga ukufaka igama lakho eligcwele, inombolo ye-Emirates ID, nosuku lokuzalwa. Imiphumela izovela.
Umnyango wezobulungiswa e-Abu Dhabi unenkonzo eku-inthanethi eyaziwa ngokuthi Estafser lokho kuvumela izakhamuzi nezakhamuzi ukuthi zihlole noma yikuphi ukuvinjelwa kohambo lokushushiswa komphakathi. Isevisi itholakala ngesiNgisi nesi-Arabhu. Uzodinga ukufaka inombolo yakho ye-ID ye-Emirates ukuze usebenzise isevisi. Imiphumela izobonisa uma kukhona ukuvinjelwa kohambo obhekene nawe.
⮚ Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah kanye no-Umm Al Quwain
Ukuze uhlole ukuvinjelwa kokuvakasha e-Sharjah, vakashela iwebhusayithi esemthethweni ye-Sharjah Police (lapha). Uzodinga ukufaka igama lakho eligcwele kanye nenombolo ye-ID ye-Emirates.
Uma ungaphakathi Ajman, Fujairah (lapha), Ras Al Khaimah (lapha), noma Umm Al Quwain (lapha), ungaxhumana nomnyango wamaphoyisa kuleyo mirate ukuze ubuze nganoma yikuphi ukuvinjelwa kohambo.
Amasheke Okuqala Okungenziwa Ngaphambi Kokubhuka Ukuya e-UAE
Ungenza ezimbalwa ukuhlolwa kokuqala (chofoza lapha) ukuze uqinisekise ukuthi ngeke kube nezinkinga lapho ubhukha uhambo lwakho oluya e-UAE.
Hlola ukuthi ukuvinjelwa kokuvakasha kukhishiwe ngokumelene nawe. Ungakwenza lokhu ngokusebenzisa izinsiza eziku-inthanethi zamaphoyisa aseDubai, uMnyango Wezobulungiswa wase-Abu Dhabi, noma Amaphoyisa aseSharjah (njengoba kushiwo ngenhla)
Qiniseka ukuthi iphasipoti yakho isebenza okungenani izinyanga eziyisithupha kusukela ngedethi yohambo lwakho lokuya e-UAE.
Uma ungesona isakhamuzi sase-UAE, hlola izidingo ze-visa ze-UAE futhi uqiniseke ukuthi une-visa evumelekile.
Uma uya e-UAE ngomsebenzi, thintana nomqashi wakho ukuze uqinisekise ukuthi inkampani yakho inezimvume zokusebenza ezifanele kanye nezimvume ezivela ku-Ministry of Human Resources and Emiratisation.
Hlola nenkampani yakho yezindiza ukuze ubone ukuthi ayinayo yini imikhawulo ekuhambeni ukuya e-UAE.
Qiniseka ukuthi unomshwalense wokuhamba ophelele ozokukhokhela uma kwenzeka uba nanoma yiziphi izinkinga ngenkathi use-UAE.
Hlola izexwayiso zezeluleko zokuhamba ezikhishwe uhulumeni wakho noma uhulumeni we-UAE.
Gcina amakhophi awo wonke amadokhumenti abalulekile, njengepasipoti yakho, i-visa, nomshwalense wokuvakasha, endaweni ephephile.
Bhalisa nenxusa lezwe lakho e-UAE ukuze bakwazi ukuxhumana nawe esimweni esiphuthumayo.
Zijwayeze nemithetho yendawo namasiko e-UAE ukuze ukwazi ukugwema noma yiziphi izinkinga ngenkathi usezweni.
Ibheka ukuthi Unecala Lamaphoyisa E-Dubai, Abu Dhabi, Sharjah Nakwenye I-Emirates
Nakuba uhlelo lwe-intanethi lungatholakali ukuze luhlolwe ngokugcwele kanye nokuhlolwa okuphelele futhi kwamanye ama-emirates, ukukhetha okusebenzayo kakhulu ukunikeza amandla ommeli kumngane noma isihlobo esiseduze noma ukuqoka ummeli. Uma ngabe usuvele uku-UAE, amaphoyisa azokucela ukuthi uze mathupha. Uma ungekho ezweni, kufanele uthole i-POA (amandla ommeli) efakazelwa yinxusa lezwe lakini le-UAE. Umnyango Wezindaba Zangaphandle we-UAE kufanele futhi ufakazele ukuhumusha kwesi-Arabic POA.
Sisengakwazi ukuhlola amacala obugebengu noma ukuvinjelwa kohambo e-UAE ngaphandle kwe-id emirates, sicela usithinte. Sishayele noma usishayele u-WhatsApp ukuze uhlole Ukuvinjelwa Kokuhamba, Iziqinisekiso Zokubopha kanye Namacala Obugebengu ku + 971506531334 + 971558018669 (kuyasebenza izindleko zesevisi zika-USD 400)
Uma uyisakhamuzi sase-UAE, ungathola uhlu lwamanxusa e-UAE namanxusa emhlabeni jikelele Isizindalwazi soMnyango Wezangaphandle Nokubambisana Kwamazwe Ngamazwe.
Uma ungesona isakhamuzi sase-UAE, ungathola uhlu lwamanxusa angaphandle namanxusa e-UAE kuwebhusayithi yoMnyango Wezangaphandle Nokubambisana Kwamazwe Ngamazwe.
Ukuthola I-Visa Yokungena e-UAE: Iyiphi I-Visa Oyidingayo?
Uma uyisakhamuzi sase-UAE, awudingi i-visa ukuze ungene ezweni.
Uma ungesona isakhamuzi sase-UAE, uzodinga ukuthola a I-visa ngaphambi kokuvakashela e-UAE. Kunezindlela eziningana zokuthola i-visa ye-UAE.
Faka isicelo se-visa ku-inthanethi ngokusebenzisa iwebhusayithi ye-General Directorate of Residency and Foreigners Affairs.
Faka isicelo se-visa enxusa lase-UAE noma kwinxusa.
Thola i-visa lapho ufika kwesinye sezindiza e-UAE.
Thola i-visa yokungena okuningi, ekuvumela ukuthi ungene futhi uphume e-UAE izikhathi eziningi phakathi nesikhathi.
Thola i-visa yokuvakasha, ekuvumela ukuthi uhlale e-UAE isikhathi esithile.
Thola i-visa yebhizinisi, ekuvumela ukuthi uye e-UAE ngezinjongo zebhizinisi.
Thola i-visa yomsebenzi, ekuvumela ukuthi usebenze e-UAE.
Thola i-visa yabafundi, ekuvumela ukuthi ufunde e-UAE.
Thola i-visa yezokuthutha, ekuvumela ukuthi uhambe e-UAE kwezokuthutha.
Thola i-visa yemishini, ekuvumela ukuthi uye e-UAE ngebhizinisi elisemthethweni likahulumeni.
Uhlobo lwe-visa oludingayo luncike enjongweni yohambo lwakho lokuya e-UAE. Ungathola ulwazi olwengeziwe ngezinhlobo zama-visa atholakala ku-General Directorate of Residency and Foreigners Affairs.
Ukuba semthethweni kwe-visa yakho kuncike ohlotsheni lwe-visa onalo kanye nezwe ophuma kulo. Ngokuvamile, ama-visa asebenza izinsuku ezingu-60 kusukela ngosuku lokukhishwa, kodwa lokhu kungahluka. Ama-visa ezokuthutha amahora angu-48-96 ayatholakala kubahambi abavela emazweni athile abadlula e-UAE futhi asebenza izinsuku ezingu-30 kusukela ngedethi yokukhishwa.
Gwema Ijele: Amathiphu Okuqinisekisa Ukuhlala Okukhumbulekayo (futhi Kusemthethweni) e-Dubai
Akekho ofuna ukuchitha isikhathi ejele, ikakhulukazi eholidini. Ukuze ugweme noma yiziphi izinkinga zomthetho ngenkathi use-Dubai, landela lawa macebiso:
Ungabuphuzi utshwala phambi kwabantu. Akukho emthethweni ukuphuza utshwala ezindaweni zomphakathi, njengamapaki namabhishi. Ukuphuza utshwala kuvunyelwe kuphela kumabha anelayisensi, ezindaweni zokudlela, nasemakilabhini.
Ungazidli izidakamizwa. Akukho emthethweni ukusebenzisa, ukuphatha, noma ukuthengisa izidakamizwa e-Dubai. Uma ubanjwe nezidakamizwa uzogqunywa ejele.
Ungagembuli. Ukugembula akukho emthethweni e-Dubai, futhi uzoboshwa uma ubanjwe ukugembula.
Ungazibandakanyi ekuboniseni uthando esidlangalaleni. I-PDA ayivunyelwe ezindaweni zomphakathi, njengamapaki namabhishi.
Ungagqoki ngendlela evusa inkanuko. Kubalulekile ukugqoka ngendlela ehloniphekile eDubai. Lokhu kusho ukuthi azikho izikhindi, amathangi angaphezulu, noma izingubo eziveza umzimba.
Ungathathi izithombe zabantu ngaphandle kwemvume yabo. Uma ufuna ukuthatha isithombe sothile, cela imvume yakhe kuqala.
Ungathathi izithombe zezakhiwo zikahulumeni. Akukho emthethweni ukuthatha izithombe zezakhiwo zikahulumeni eDubai.
Ungaphathi izikhali. E-Dubai, akukho emthethweni ukuphatha izikhali, njengemimese nezibhamu.
Ungalahli udoti. Ukulahla udoti kujeziswa ngokuhlawuliswa eDubai.
Ungashayeli budedengu. Ukushayela budedengu kujeziswa ngokuhlawuliswa nokuboshwa eDubai.
Ngokulandela lawa macebiso, ungagwema ukungena enkingeni ngomthetho ngenkathi use-Dubai.
Yini Ongayilindela Lapho Uvakashela eDubai NgeRamadan
IRamadan yinyanga engcwele kumaSulumane, lapho azila khona kusukela ekuseni kuze kuhlwe. Uma uhlela ukuya eDubai ngesikhathi seRamadan, kunezinto ezimbalwa okufanele uzazi.
Izindawo zokudlela eziningi nezindawo zokudlela zovalwa phakathi nosuku. Iningi lezindawo zokudlela nezindawo zokudlela zizovulwa ebusuku kuphela.
Kuzokwehla isiminyaminya emigwaqeni emini.
Amanye amabhizinisi angase abe namahora ancishisiwe phakathi neRamadan.
Kufanele ugqoke ngendlela efanele futhi ugweme ukugqoka izingubo eziveza umzimba.
Kufanele uhloniphe abantu abazilayo.
Ungathola ukuthi ezinye izinto ezikhangayo zivaliwe ngesikhathi seRamadan.
Kungase kube nemicimbi ekhethekile nemisebenzi eyenzekayo phakathi neRamadan.
Iftar, isidlo sokuqeda inzilo, imvamisa iyinkathi yemikhosi.
I-Eid al-Fitr, umkhosi osekupheleni kweRamadan, isikhathi sokugubha.
Khumbula ukuhlonipha isiko namasiko endawo lapho uya eDubai ngesikhathi seRamadan.
Izinga Lobugebengu Eliphansi e-UAE: Kungani Umthetho We-Sharia Ungaba Isizathu
Umthetho we-Sharia wuhlelo lwezomthetho lwamaSulumane olusetshenziswa e-UAE. Umthetho we-Sharia ubandakanya zonke izici zempilo, kusukela emthethweni womndeni kuya emthethweni wobugebengu. Enye yezinzuzo zomthetho we-sharia ukuthi usize ukudala izinga eliphansi lobugebengu e-UAE.
Kunezizathu ezimbalwa zokuthi kungani umthetho we-sharia ungaba isizathu sezinga eliphansi lobugebengu e-UAE.
Umthetho we-Sharia uhlinzeka ngokuvimbela ubugebengu. Izijeziso zobugebengu ngaphansi komthetho we-sharia zinzima, okusebenza njengesivimbelo kulabo abangase babe izigebengu.
Umthetho we-Sharia uyashesha futhi uqinisekile. Ngaphansi komthetho we-sharia, akukho ukungabi nabulungisa ukubambezeleka. Uma icala lenziwe, isijeziso sikhishwa ngokushesha.
Umthetho we-Sharia usekelwe ekuvimbeleni, hhayi ekubuyiseleni izimilo. Umgomo we-sharia ugxile ekuvimbeleni ubugebengu esikhundleni sokuhlunyeleliswa kwezimilo izigilamkhuba.
Umthetho we-Sharia uyisinyathelo sokuvimbela. Ngokulandela umthetho we-sharia, abantu mancane amathuba okuthi benze ubugebengu kwasekuqaleni.
Umthetho we-Sharia uvimbela ukuphindaphinda. Izijeziso ngaphansi komthetho we-sharia zinzima kangangokuthi izigebengu mancane amathuba okuba ziphinde zone.
ICoronavirus (COVID-19) Nokuhamba
Ukuqubuka kwe-coronavirus (COVID-19) kubangele amazwe amaningi ukuthi abeke imingcele yokuhamba. Izidingo ze-Covid-19 kubahambi abaya e-UAE zibekwe nguhulumeni wase-UAE.
Bonke abahambi abaya e-UAE kufanele babe nomphumela wokuhlolwa we-Covid-19 ongemuhle.
Abahambi kumele bethule imiphumela yabo yokuhlolwa ye-Covid-19 engemihle lapho befika e-UAE.
Abahambi kumele bethule izitifiketi zezokwelapha ezivela ezweni labo lendabuko ezisho ukuthi abanayo i-Covid-19.
Okuhlukile ezimfuneko zokuhlolwa kwe-PCR kungase kwenziwe kubahambi abagonyelwe i-Covid-19.
Izimpi Zokuvikela, Ukuqasha, kanye Nesikweletu Esingakhokhiwe Kungabeka Ukuvinjelwa Kokuhamba
Kunezinombolo eziningi izizathu zokuthi kungani umuntu engase avinjelwe ukuhamba. Ezinye zezizathu ezijwayelekile zokuvinjelwa kohambo zifaka:
Izimpi zokuvikela: Ukuze ugweme ukukhipha ingane ezweni.
Qasha: Ukukuvimbela ukuthi uphume ezweni ngaphandle kokukhokha indawo yakho yokuhlala.
Isikweletu esingakhokhiwe: Ukukuvimbela ukuthi uphume ezweni ngaphandle kokukhokha izikweletu zakho.
Irekhodi lobugebengu: Ukukuvimbela ukuthi ungalishiyi izwe futhi wenze obunye ubugebengu.
I-Visa Overstay: Ungavinjelwa ukuhamba uma usuhlale isikhathi eside i-visa yakho.
Uma uhlela ukuya e-UAE, qiniseka ukuthi awuvinjelwanga ukuhamba. Uma kungenjalo, ungase ungakwazi ukungena ezweni.
Ngenze Ngokuzenzakalelayo Emalimboleko: Ngingakwazi Ukubuyela e-UAE?
I-Federal Decree-Law No. (14) ka-2020 Yokuxazulula Izikweletu, Ukuchibiyela Ikhodi Yezigwebo, kanye Nokwethula Imibandela Emisha ithi noma yimuphi umuntu owephule imali ebolekiwe uzovinjelwa ekuhambeni. Lokhu kubandakanya noma yimuphi umuntu ohlulekile ukubuyisela imali mboleko yemoto, imali mboleko yomuntu siqu, isikweletu sekhadi lesikweletu, noma imali ebolekiwe.
Uma uhlulekile ukuboleka imali, ngeke ukwazi ukubuyela e-UAE. Uzokwazi kuphela ukubuyela e-UAE uma ususikhokhile isikweletu sakho ngokugcwele.
Odinga Ukukwazi Mayelana Nomthetho Omusha Wokuhlola Obhantshisiwe e-UAE
I-UAE ithathe Hlola 'njengetayitela lesikhulu'.
Kusukela ngoJanuwari 2022, amasheke abhantshiwe ngeke esathathwa njengecala lobugebengu e-UAE. Umnikazi akudingeki aye enkantolo ukuze avule icala, njengoba isheke elibhampisiwe lizothathwa 'njengetayitela lesikhulu'.
Kodwa-ke, uma umnikazi wesheke efuna ukuthatha izinyathelo zomthetho, usengaya enkantolo, alethe isheke elibhampayo, futhi afune amademeshe.
Kunezinto ezimbalwa okufanele uzikhumbule uma uhlela ukubhala isheke e-UAE:
Qiniseka ukuthi unemali eyanele ku-akhawunti yakho ukukhokhela inani lesheke.
Qiniseka ukuthi umamukeli wesheke ngumuntu omethembayo.
Qiniseka ukuthi isheke ligcwaliswe kahle futhi lisayinwe.
Gcina ikhophi yesheke uma kwenzeka libhampa.
Ngokulandela lawa macebiso, ungagwema ukuthi isheke lakho libhampilwe futhi uvinjelwe ukuhamba.
Uhlele Ukushiya i-UAE? Ungazihlola Kanjani Uma Uvinjelwe Ukuhamba
Uma uhlela ukushiya i-UAE, kubalulekile ukuhlola ukuthi unokuvinjelwa kokuvakasha yini. Kunezindlela ezimbalwa zokuhlola ukuthi ingabe unokuvinjelwa kokuvakasha:
Buza nomqashi wakho
Hlola esiteshini samaphoyisa sendawo
Hlola nenxusa lase-UAE
Hlola ne-ejenti yakho yezokuvakasha
Uma unomkhawulo wokuhamba, ngeke ukwazi ukuphuma ezweni. Ungase uboshwe futhi ubuyiselwe e-UAE uma uzama ukuhamba.
Kubalulekile ukusebenza nommeli ozokwenza isheke eliphelele ku-waranti yokuboshwa okungase kube khona kanye nokuvinjelwa kohambo okufakwe kuwe e-UAE. Ikhophi yakho yepasipoti nekhasi le-visa kufanele ihanjiswe futhi imiphumela yaleli sheke iyatholakala ngaphandle kwesidingo sokuvakashela iziphathimandla zikahulumeni e-UAE.
Ummeli omqashile uzokwenza ukuhlola okuphelele neziphathimandla zikahulumeni we-UAE ezihlobene ukuze anqume ukuthi ikhona yini incwadi egunyaza ukuboshwa noma ukuvinjelwa kohambo ofakwe kuwe. Manje usungakwazi ukonga imali yakho nesikhathi ngokuhlala kude nezingozi ezingaba khona zokuboshwa noma ukwenqatshwa ukuphuma noma ukungena e-UAE phakathi nohambo lwakho noma uma kunokuvinjelwa kwesikhumulo sezindiza e-UAE. Odinga ukukwenza nje ukuhambisa amadokhumenti adingekayo ku-inthanethi futhi ngemva kwezinsuku ezimbalwa, uzokwazi ukuthola imiphumela yaleli sheke nge-imeyili evela kummeli. Sishayele noma usishayele WhatsApp ku + 971506531334 + 971558018669 (kuyasebenza izindleko zesevisi zika-USD 400)
Hlola nathi Isevisi Yokuboshwa Nokuvinjelwa Ukuhamba - imibhalo edingekayo
imeyili - Uzothola imiphumela yesheke nge-imeyili kusuka kummeli wakho. Imiphumela izokhombisa uma une-waranti / ban noma cha.
Sishayele noma usishayele WhatsApp ku + 971506531334 + 971558018669 (kuyasebenza izindleko zesevisi zika-USD 400)